रेखा र छविको पहिले पानी वारावार, अहिले रक्सी सारासार ~ The Nepal Romania
रेखा र छविको पहिले पानी वारावार, अहिले रक्सी सारासार
11:04 AM चलचित्र समाचार No comments
भनिन्छ, सुखमा नमात्तिनु, दुःखमा नआत्तिनु । तर, नायिका रेखा थापा र निर्माता छवि ओझाका लागि भने यो कुरा लागू भएन । डिभोर्सको कुरा गरेर केही दिन यता मिडियामा चर्चामा आएका यि दुई जोडिवीच वोलचाल नै नभएको १० महिना भएको थियो । तर मंगलवार पहिलो पटक यि दुईवीच पहिलो पटक वोलचाल भएको थियो । वोलचाल भएपछि रेखा र छवि दुवै दङ्ग र मख्ख पनि थिए । उनीहरुले सहमति भएपछि डिभोर्स र सँगै वस्ने भन्ने कुरा आधा आधा रहेको वताएका थिए । तर, रमाईलो कुरा के छ भने, १० महिना पछि वल्ल वल्ल वोलेका रेखा र छविलाई यो खुशि साट्ने हतार निक्कै भएको
देखिन्छ । उनीहरु, निक्कै खुशि भए र यो खुशि आफु आफुमा मात्र साट्न चाहेनन् । यसैले पनि होला, वोलेको दिनमै अरु कुरा गर्न छोडेर वियर फोड्न निस्किए । त्यो पनि दुई जना मात्र होईन, आफ्ना नजिकका भनिएका साथीहरु समेत लिएर । काठमाण्डौको वानेश्वरमा रहेको एक क्याफेमा यि दुईले वियर को पार्टी दिएका थिए । निर्माता छविराज ओझा निक्कै खुशि देखिए भने नायिका थापाको खुशिको पनि सिमा थिएन । यि दुईको जोडि छुट्छ या सँगै हुन्छ भन्ने अझै टुङ्गो छैन, तर १० महिना नवोलेका यिनका लागि वोलचाल हुनु नै निक्कै ठुलो कुरा भएको थियो । यि दुईको पार्टीमा रेखा निकट मानिएकी निशा सुनुवार, निर्देशक सविर श्रेष्ठ, शोभित वस्नेत, नृत्य निर्देशक शंकर विसी, रेखा निकट मानिएका ध्रुव न्यौपाने सहभागी भएका थिए । रेखा र छविले आफुहरुवीच वोलचाल भएको भन्दै खुशि मनाउन वियर फोरेका थिए । पार्टीमा छवि निक्कै खुशि देखिएका थिए । रेखा पनि छविसँग फेरी वोल्न पाउदा हषिर्त देखिएकी थिईन् । छवि र रेखा निकट श्रोत भन्छ, यि दुईवीच डिभोर्स हुँदैन । सामान्य मनमुटाव भएपनि यि दुईले अरुको कुरा धेरै सुन्दा समस्या आएको श्रोतको भनाई छ । यसरी, कुनै वेला पानी वारावार गरेका रेखा छवि अहिले वियर सारासार गरीरहेका छन् । रेखा र छविको यो खुशि सधैभरी नै रहोस्, हाम्रो भनाई त यति नै हो ।
प्रेमी प्रेमिका बनेर च्याटिङमा माया बसेपछी प्रेमी त आफ्नै दाजु परेपछि ! हेर्नुस् भिडियो
Bouncer Short Film HD
Actor: Prashant Giri/ Prajwal Giri/ Shushma Karki Director/Story: Madan Ghimire Prosucer: Ram Giri YD/Yuddha Lama
चलचित्र 'कोही…मेरो'ले ओपनिङ सन्तोषजनक गरेको छ । तथ्यांक केलाउँदा यो चलचित्रलाई मल्टिप्लेक्स दर्शकहरुले रुचाएको पाइयो । सिङ्गल स्क्र...
एटीएम फिल्म होईन, विकृतिको पराकाष्ठ ?(भिडियोसहित)
छताछुल्ल निशा र करिश्माको जवानी (फोटो फिचर सहित)
Full Nepali Movie The Yug Dekhi Yug Samma
रेखा र छविको पहिले पानी वारावार, अहिले रक्सी सारास...
रेखा थापाले गरिन् सम्बन्ध विच्छेद
९९ प्रतिशत केटाहरु धोकेवाज हुन्छन
Full Nepali Movie LOOT in HD - Don't Miss to Watch...
रेखाका लागि वार्ताको ढोका खुल्ला गरे छविले !